July | 2013 | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 22/07/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: တန္ခိုး.	1 Comment
ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းတော်မူ၏။ အမှုရောက်သောအခါ ရဲတိုက် ဖြစ်တော်မူ၏။ ခိုလှုံသောသူ တို့ကို သိမှတ်တော်မူ၏။ (နာဟုံ ၁း၇)
ဤကျမ်းပိုဒ်ကလေးသည် ဘုရားသခင် အကြောင်းကို များစွာ ပြောပြနေပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်ကလေးသည် ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးသားကို ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စေပါသည်။
ဘုရားသခင်ကို ချစ်သော သာသနာပြုဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်သူ အေလင် ဂါဒီနာသည် အမှုတော်မြတ်ကို ဆောင် ရွက်ရာတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် အခြား ခက်ခဲမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်။ သို့သော်လည်း သူက ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့သည်မှာ “ဘုရားသခင်က ခွန်အားပေးထားတဲ့အချိန်မှာ ကျဆုံးခြင်းတွေက မိမိကို တုန်လှုပ် အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ” ဟု ၁၉၅၁ ခုနှစ် အသက် (၅၇) အရွယ်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သူသည် ရောဂါဝေဒနာများနှင့် အတူ အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ခံစားရပြီး တောင်အမေရိကတိုက်၏ တောင်ဘက်စွန်တွင် ရှိသော ပစ်တွန်ကျွန်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ အထက်ပါ ရေးသားချက်ကို သူစာလောင်မွတ်သိတ်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ အထီးကျန်ဖြစ်ခြင်းတို့ ခံစားရချိန်တွင် ရေးသားထားခဲ့ဟန် ရှိသည်။ သူ၏ သေဆုံးနေသော ရုပ်ခန္ဓာကို တွေ့ရချိန်တွင် သူ့အနားတွင် သူရေးသားထားသော ဒိုင်ယာယီ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုလည်း တွေရှိရသည်။ နောက်ဆုံး ရေးသားချက်သည် သူ၏ လက်ချောင်းလေးများ အနည်းငယ်သာ လှုပ်ရှားနိုင်ချိန်တွင် ရေးသားထားခဲ့ဟန် ရှိပါသည်။ ရေးသားထားသည့် အရာမှာ “ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ် ခြင်းက ငါ့ကို လွမ်းမိုးအနိုင်ယူလျက် ရှိပါသည်။” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဘုရားသခင် ကောင်းမြတ်သည်။
က။ ကောင်းကင်မြေကြီးထက်မက ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာတော်က ကျွန်တော်တို့ကို လွှမ်းမိုးလျက် ရှိပါ သည်။ သူ၏ ကောင်းမြတ်သောသဘောနှင့် ဂရုဏာတော်သည် ကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင် ရှိနေပါသည်။
ထာဝရဘုရားသည် သနားတတ်သောသဘော၊ ကျေးဇူးပြုတက်သောသဘော၊ စိတ်ရှည်၍ ကရုဏာ ကြွယ်ဝသော သဘောရှိတော်မူ၏။ (ဆာလံ ၁၀၃း၈)
ခ။ ကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင် ကောင်းမြတ်ခြင်းများ အပ်နှင်းလျက် ရှိပါ၏။ ထိုအရာများကို ဆန်းစစ် ရေတွက်ကြည့်လျှင်
လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတော်တွင် နေခွင့်ရသော ကောင်းကြီး
အသင်းတော်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ရသော ကောင်းကြီး
လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ရှိသော ကောင်းကြီး
ဂ။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်း နှင့် အမှုတော်ထဲတွင် ပါဝင်သက်သေခံခြင်း၊ အမှုတော်မြတ်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်း အမှုအရာများတွင် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းကို သံသယ ရှိလာရန် စာတန်သည် အစဉ်ကြိုးစားလျက် ရှိပါသည်။
ဃ။ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းမြတ်ခြင်းကို ချီးမွမ်းလျက်ရှိသော ကျွန်တော်တို့၏ အချိန်နာရီများကို ရပ်တန့် သွားစေရန် ကြိုးစား အားထုပ်လျက် ရှိသည်။
၂။ ဒုက္ခရောက်သောအချိန်များတွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ ခွန်အားဖြစ်သည်။
က။ ယောသပ်က ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ ရူပါရုံကြောင့် ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်ရောက် ခွန်အားနဲ့ ပြည့်ဝ နေခဲ့တယ်။
ခ။ မောရှေဟာ အမှုတော်မြတ်မှာ ခက်ခဲပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကြောင့် ခွန်အားရှိနေခဲ့တယ်။
ဂ။ ဂိဒေါင်ဟာ အားနည်းပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကြောင့် အားကြီးသော အချင်းသူရဲ ဖြစ်ခွင့်ရတယ်။
အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် သင့်ကိုမစွန့်၊ သင့်ကို အလျှင်းပစ်၍မထားဟု ဂတိတော်ရှိ၏။ (ဟေဗြဲ ၁၃း၅)
၃။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့ကို သိသောဘုရား ဖြစ်သည်။
က။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ အားနည်းချက်များကို သိပြီးသော ဘုရားဖြစ်သည်။
ခ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့တွင် ရှိသော ခွန်အားများကို သိရှိသလို မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုရမည်ကို သိသော ဘုရားဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့် ပတ်သတ်လျှင် အစဉ် အမှတ်တရ ဖြစ်နေမည့်သူ ဖြစ်သည်။ သင်ပြောသမျှ စကားတိုင်း၊ ဆုတောင်းချက်တိုင်းကို အချိန်တိုင်း၊ နာရီတိုင်း၊ မိနစ်တိုင်းတွင် နားထောင်နေချင်သူ ဖြစ်သည်။ သူသည် စကြဝဠာကြီး တစ်ခုလုံးတွင် နေထိုင်နိုင်သော်လည်း သင်၏ နှလုံးသားထဲတွင် အစဉ် နေထိုင်လိုသူ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကောင်းမြတ်သော ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးသား ဗိမ္မာန်တော်ကြီးထဲတွင် ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်သန်နေသ၍ ခေါ်ပင့်ကာ ကျွန်တော်တို့၏ အသက်တာထဲမှ ထာဝရ ကိုးကွယ်ရာ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကာ ကိုးစား ခိုလှုံကြပါစို့။